Banyere Anyị - Ningbo Ke Ming Machinery Co., Ltd
Ningbo Yinzhou Ke Ming Machinery Manufacturing Co., Ltd. ọkachamara n'ichepụta nke furu efu wax ego oge ọgbụgba na okokụre ngwaahịa na carbon nchara na ala alloy ígwè, bụ a soplaya nke ulo oru mbo oge ọgbụgba na mmiri iko usoro na China. Ọ mejupụtara 2 isi ụlọ ọrụ, ma ígwè mgbatị foundry na CNC machining factory nke-eme ka anyị na-enye ma nkenke oge ọgbụgba na okokụre ngwaahịa na kwa afọ mmepụta ike nke n'elu 10000 tọn, na ngwaahịa na-tumadi exported na Europe, America, Japan na ndị ọzọ ebe gburugburu ụwa.
Anyị ụlọ ọrụ dị na ama ulo oru obodo Yinzhou, Ningbo na China. Ọ bụ nnọọ adaba ruru na uru ala ọnọdụ. Anyị ụlọ ọrụ e guzobere na 2002, ọ na-ekpuchi a ngụkọta nke ebe 5000 square mita na ugbu a nwere ihe karịrị 50 employees.We nwere oge a na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na elu CNC machining akụrụngwa.
Anyị na ngwaahịa ekpuchi a dịgasị iche iche nke ọrụ tinyere ụgbọ okporo ígwè & ụgbọ okporo ígwè, ụgbọala & ụgbọala, na-ewu ígwè, Ngwuputa ígwè, forklift, ugbo ígwè, shipbuilding, mmanụ ala ígwè, ewu, valvụ na nfuli, electric igwe, ngwaike, ike na ngwá na na. Anyị nwere ike na-emepụta na ngwaahịa dị ka ndị ahịa 'nghọta ma ọ bụ n'omume, anyị na-elekwasị anya na ma carbon nchara na ala alloy ígwè. Ruo taa, ihe karịrị 100 ngwaọrụ na 5,000 iche iche nke dị iche iche ngwaahịa e mepụtara na-emepụta site anyị. Anyị bụ ndị maara na ndị dị iche iche ulo oru ụkpụrụ, dị ka Chinese GB, American ASTM, AISI, German DIN, French NF, Japanese JIS, British Bs, Australian AS na Association of American Railroads (AAR) na ndị ọzọ na ulo oru na ụkpụrụ.